Javier Mascherano Oo Sabab U Noqday Rikoodhihii Laga Qabtay Aguero
HomeChampions LeagueJavier Mascherano Oo Sabab U Noqday Rikoodhihii Laga Qabtay Aguero
Gool-hayaha Barcelona ee Marc-Andre ter Sterger ayaa isku duubay kubbad rikoodhe ahayd daqiiqaddii 78aad ee ciyaar xalay dhex martay Barcelona iyo Manchester City taas oo ku dhamaatay 1-0 ay ku badisay Barca oo celcelis ahaan ku baxday 3-1.
Haddaba, waxa soo baxday in rikoodhahan uu gool-hayaha ka caawiyey in uu qabto laacibka Mascherano oo intii aanu kubadda laadin Aguero gacanta ugu tilmaamay gool-hayaha halka uu kubadda ka dhigi doono.,,
Markii ay ciyaartu dhamaatay ayaa waxa la soo bandhigay Javier Mascherano oo ay isku waddan yihiin Aguero oo u tilmaamaya gool-hayihiisa dhinaca bidix ee goolka oo ah halkii uu doonayey in uu toogto Aguero. Goolhayaha ayaa qaatay talada Mascherano waxaanu isku tuuray dhincisii loo tilmaamay halkaas oo ay ku kulmeen kubaddii lagu soo laaday oo dabeetana uu ka qabtay.
Mascherano ayaa qirtay in uu goolhaye Ter Stegen kula taliyey in uu isku tuuro dhinacaas oo ah halka uu inta badan toogto Aguero.
Mascherano Oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi: “Waxaan bartay sida uu rikoodheyaasha u laago intii aanu u wada ciyaaraynay xulka qarankayaga.”.
Ter Stegen ayaa isaguna qiray in uu qaatay talada Mascherano iyo waliba Rafinha oo si wada jir ah ugula taliyey in uu dhinaca bidixda uun isku tuuro.
Isku Aadka Champions League Oo La Soo Saaray, Kooxo Adag Oo Afka Iska Galay Iyo Kulamada Ugu Xiisaha Badan Ee Dhici Doona
25/08/2016 Abdiwahab Ahmed
Celtic Oo karbaashtay Kilmarnock